Afduubka caruurta oo magaaladda Muqdisho sas gelkiyey waalidiinta – Madal Furan
Hoy > Warka > Afduubka caruurta oo magaaladda Muqdisho sas gelkiyey waalidiinta
Afduubka caruurta oo magaaladda Muqdisho sas gelkiyey waalidiinta
Madal Furan – Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa maalmihi u dambeeyay walaac ka muujinayay amni darrada ka jirta magaaladaasi gar ahaan afduub la sheegay in loo gaystay carruur, iyadoo maalmo uun ka hor la helay meydka cunug shan sano jir ah oo saacado ay qoyskiisa la’aayeen.
“Dhaawacyo wiilkayga ka soo gaaray isku day afduub ayaa hadda laga dabiibayaa” ayuu yiri Sakariya Maxamed Cumar oo ah aabaha dhalay wiilka oo 11 jir ah.
‘Waxaa la’iga soo wacay saldhigga booliska Xamar Weyne, waxaa la’ii sheegay in wiilkayga oo dhaawac ah uu waddada ka soo qabtay nin boolis ah, markaan u tagay waxaan arkay dhaawac ku yaalla, saddex meel ayaa toorrey laga geliyay, isbitaal ayaan geeyay hadda sidii hore wuu dhaamaa,” ayuu yiri Sakariye oo la hadlay BBC.
”Dhacdadaasi kaddib, wiilkeyga isbadal badan ayaan ku arkay oo hurdo fiican ma helo habeenkii, wuxuuna ku qarwaa iga qabta, iga qabta, mar walba niyadda ayaan u dejiyaa lakiin wuxuu iloobi la’yahay toorridii lagu dhuftay”.
”Ma jiraan wax afduub ah oo ka jira magaalada, waan ka war haynaa in la helay meydka wiil yar dad ayaana loo soo qabtay, baaritaan arrintaas ku aaddan ayaana socda. dhacdooyinkan waxaa ka dambeeya dad doonaaya inay khalkhal geliyaan ammaanka magaalada cabsina ku abuuraan shacabka.” ayuu yiri afhayeenka booliska Soomaaliya.
”Wiilkeyga waxaa iigu dambeysay maalintii Jimcaha shantii saac ee barqanimo, markaan saacado badan weynay ayaan galnay inaan baadi goobno, saddex saac oo habeenimo ayaa nala soo wacay, oo nalagu yiri waxaa la qabtay dad uu meydka cunug yar u saaran yahay gaari, waan aadnay waxaan ogaanay in uu isaga yahay, aad ayaan u argagaxay, waad dareemi kartaa aabe wiilkiisa uu ka tagay isagoo faraxsan haddana arkay meydkiisa oo jirdil uu ka muuqdo.”
Madaxweynaha Deni oo maanta ku wajahan magaalo ay dacalada ka fadhiyaan ururada Al-shabaab iyo Daacish.
DAAWO: Garoonka Diyaaradaha Hargeysa:-Way Sujuudeen markay Magafe ka soo badbaadeen